Movistar + waa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay abuuraan oo duubaan waxyaabaha ku jira | Wararka IPhone
Movistar waxay leedahay dalabkii ugu badnaa ee maqal iyo muuqaal ah oo aan hada ku heli karno Spain, waana inay isu keento waxyaabaha ugu fiican shirkadaha sida HBO, FOX, kubada cagta iyo waxyaabo kale oo badan ... Si kastaba ha noqotee, sida badanaa dhacdooyinkaas, Movistar wuxuu leeyahay codsi taas oo madax xanuun dhab ah u ah isticmaaleyaasheeda. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxay qaadanayaan ogeysiis ka badan intii caadiga ahayd waxayna soo bandhigayaan awoodo aan la fahmi karin aysan ahayn ilaa hadda. Wixii ka dambeeya naqshadeynta, tani waxay noqon kartaa cusbooneysiinta ugu habboon ee Movistar + illaa maanta. Hadda Movistar + wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameysatid koonto isticmaaleyaal kala duwan waxayna umuuqataa waxbadan oo lamid ah Netflix, laakiin maahan tan cusub.
Dhammaan tabaha ay Safari ku jirto iOS 13 [VIDEO]
Kaliya waa inaad tagtaa macruufka App App oo aad aragtaa in codsigu leeyahay wax kayar laba xiddigood oo qiimeyn ah, runtiina inay masiibo tahay, ma ogola in laga boodo hordhaca taxanaha, nidaamka keydinta ayaa ku fashilmay, mana sameeyo dhacdo otomaatig ahaan cutubka iyo ciyaaryahanka qufulka ka badan si joogto ah. Si kastaba ha noqotee, Mar kasta oo ay xooga saaraan cusbooneysiinta iyo midkan, tusaale ahaan, waxay keeneysaa war aynaan ahayn inaan seegno, waana mid ka mid ah cabashooyinka adeegsadayaasha oo si sax ah u awoodi waayey inuu kala saaro waxyaabaha ka jira isla guriga, cabashadan ayaa dhammaatay:
Waad samayn kartaa duubista fog ee waxyaabahaaga si toos ah abka, haddii aad gujiso "Diiwaanka" waxaad ka heli kartaa duubistaas markasta iyo sidaad rabto.
7 dii Maalmood ee la soo dhaafey waxay keydineysaa dhamaan waxyaabaha ku jira kanaallada telefishinka oo ay ku jiraan, waxaadna hadda ka heli kartaa barnaamijkii shalay ama warka subaxnimo ee taleefankaaga iPhone adiga oo aan dhibaato kale qabin.
Waad abuuri kartaa ilaa afar muuqaal oo kala duwan oo laga helo macruufka sidaa darteed talooyinka iyo cutubyada la kaydiyey waxay u dhigmaan isticmaalehaaga gaarka ah, si aanad waxba u seegin.
Kuwanuna asal ahaan waa - wararka ku jira nooca 6.1.1 ee arjiga ee ku jira App-ka App Store, in kasta oo ay weli waxyaabo badan u baahan tahay inay horumariso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Movistar + waa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto isticmaaleyaal oo aad duubto waxyaabaha ku jira